Ogaden News Agency (ONA) – JWXO oo hambalyo u diray shacabka Koonfur Suudaan
JWXO oo hambalyo u diray shacabka Koonfur Suudaan
Halgan dheer iyo mintidnimo iyo adkaysi ka dib; waxay maanta u dabaaldageen shacabka Koonfurta Sudaan Xoriyadoodii waxayna noqotay dawladii ugu dambaysay oo ku soo biirta dawladaha xorta ah ee Afrika. Shacabka Ogadenya oo halganka shacabka Koonfurta Sudaan si dhab ah ula socday marxaladihii kala duwaa ay soo mareen, waxay aad ugu faraxsan yihiin in Afrika ugu dambayntii ay xaqiiqsadeen in qodobkii uu boqor Xayle Selaasi ka saxiixay dawaladihii Afrika 1963 ee dhigayay in xadka siduu ahaa loo daayo aanu cadaalad ahayn isla markaana nabadii iyo xasiloonidii Afrika uu khatar ku ahaa.
JWXO iyadoo wakiil ka ah shacabka Ogadenya oo ka tarjumaysa himiladiisa ayay soo saarteu bayaankan taageerada ah;
Warsaxaafadeedka Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya
Maanta oy bishu tahay 9ka July 2011 waxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya iyadoo ku hadlaysa magaca dhamaan shacabka Ogadenya, Hogaanka iyo xubnaha JWXO ay u hambalyay-nayaan shacabka Jamhuuriyadda Koonfurta Sudan (Republic of South Sudan) oo maanta gobanimadoodii qaatay noqdayna dal cusub oo ku soo biiray dalalka xorta ah ee Afrika.
Shacabka Ogadenya waxay si hoose ula socdeen halgankii xaqqa ahaa ay soo mareen shacabka South Sudan, taasoo keentay taariikhdan cusub ee Afrika u bilatay, waxayna soo dhaweynayaan dawladdan cusub ee dhalatay. Halganka shacabka Koonfurta Sudan ma’ahayn mid sahlan. Waxay ahayd mid naf badan loo huray oo loo adkaystay dhibkiisa.
Mujtamaca caalamka, gaar ahaan dawladaha deeqda bixiya iyo Midowga Afrika ayaana qayb fiican ka qaatay sidii loo fududeyn lahaa wadahadalkii labada dhinac ee horseeday gobanimada shacabka South Sudan. Maalgalintaa lagu sameeyay nabdda iyo cadaaladda waxaan shaki ku jirin inuu qayb fiican ka qaadan doono xasiloonida Geeska Afrika.
Waxaan rajaqabnaa in dadaalkaa mid u dhigma la galiyo sidii nabad iyo cadaalad loogu soo dabaali lahaa Ogadenya, waxaa kaloo aan rajaynaynaa in dawladdan cusub ee Jamhuuriyadda Koorfurta Sudaan ay qayb fiican ka qaadato sidii xal waara loogu heli lahaa qadiyadda xaqqa ah iyo halganka dheer ee shacabka Ogadenya uu ugu jiro xaqiisa aaya-ka-tashi.
axamad xassan says:
wasas halgan an loo adkaysanin lama helo wana cashir qofwalaba oo niyadiisa gasho xoriyad sadar teed dad weynaha ree ogadeniya waxan lee ahay samirka halabadiyo baaaaaaaaaaay